Ukuhlalutya iXhegokazi laManzi | Ngeentlanzi
IVieja del Agua, le yenye yeentlanzi ezimangalisayo
UIldefonso Gomez | | Amanzi olwandle
Xa kuziwa ekujongeni iintlanzi ezikhoyo emhlabeni wolwandle, inyani kukuba sinokuthatha izinto ezininzi ezimangazayo. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yohlobo (esele ininzi), kodwa nangenxa yokubonakala kwezinye iintlobo zinomdla wokwenene. Inkqubo ye- Umfazi Omdala Wamanzi unokuba ngumzekelo olungileyo wokubhengeza.
ILa Vieja del Agua yeyosapho Loricariidae, ukubakho kwiindawo ezinjengemilambo yaseParagua, iUruguay, iParaná kunye ne de la Plata. Xa uyibona okokuqala ngekhe ukwazi ukuyilibala. Ngokukodwa kuba, ngokwabantu, ayikhangeleki intle kakhulu.
Okokuqala, inamacwecwe emathambo okanye amakhaka ayigqumayo ukuyikhusela. Inombala omnyama, i-dorsal fin kunye nomsila omkhulu. Umlomo, endaweni yoko, umncinci, uneentshebe ezimbini ezisebenzisa ngokungathi zizivamvo. Kwelinye icala, emazantsi umzimba Ithe tyaba, inombala ongagungqiyo kunamanye amalungu.
Ukhetha i amanzi afudumeleyo, nangona kungabonakali ngokuhamba okukhulu. Ngokuchasene noko: kuhlala kuthe cwaka ixesha elide ukuzingela ixhoba. Ukutya kwayo ubukhulu becala kwenziwa nge-mojarras, tarpon kunye ne-microorganisms ezikhoyo kwiindawo ezihlala kuzo.
La ukuzala Inomdla kwakhona: ithwala amaqanda achumileyo kumngxunya osemhlathini osezantsi, kude kube ngumzuzu abawachasayo. Kuya kuba ngelo xesha xa beqhotse. Ngayiphi na imeko, ihlala ikhusela abancinci nokuba bayaphuhliswa.
ILa Vieja del Agua luhlobo lweentlanzi olunomdla, nkqu inobungozi ngamanye amaxesha. Akucetyiswa ukuba ube nee-aquariums, ngaphandle kokuba uthotho lwamanyathelo okhuseleko kunye nolondolozo abekiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » IVieja del Agua, le yenye yeentlanzi ezimangalisayo
Amanzi amadala, olunye uhlobo lucoca iingxowa
Ukungabikho kweoksijini, umbulali wezigidi zeentlanzi